Kolleejjii Qonnaa Allaagee: 'Oromiyaa keessatti ijoollee Afaan Oromoon barsiifachuu dadhabne' - BBC News Afaan Oromoo
Kolleejjii Qonnaa Allaagee: 'Oromiyaa keessatti ijoollee Afaan Oromoon barsiifachuu dadhabne'
Image copyright Alage ATVET
Barsiisonnii fi hawaasni Kolleejjii Qonnaa Allaagee keessa jiraatan waggoota dheeraaf mirgoota diimokiraasii hedduu sarbamanii jiraachaa akka jiran BBC'tti himan.
Erga mootummaan ADWUI'n hogganamu aangootti dhufee filannoo biyyaalessaa irratti hirmaatanii hin beekani, lakkoofsa uummataa irratti hin lakkaa'amani, ijoollees afaan dhaloota isaaniin barsiisuuf hiree hin arganne jedhu.
Kolleejicha kan bulchu Ministeerri Qonnaa rakkoolee kana quba hin qabu jedha.
Finfinnee irraa gara Kibba Bahaatti km215 fagatee daangaa naannolee Oromiyaa fi kan Uummattoota Kibbaa gidduutti kan argamu kolleejjiin kun lafa heektaara 3900 olirra qubatee jira.
Kana keessaa harki 75 kan ta'u naannoo Oromiyaa keessa akka jiruufi barattoota osoo hin dabalatiin tilmaamaan uummati hanga kuma 12 kolleejicha keessa akka jiraatu ragaan kolleejicha irraa arganne ni hima.
Kolleejichi dhaabbata barnootaa qofa osoo hin taane magaalaa xiqqoo bifa idileen jiraattonni keessa qubatanii jiraatanidha.
Haa ta'u malee naannoos ta'e bulchiinsa magaalaa kam jalayyuu hin jiru.
Sababi guddaan uummati achi keessa jiraatu mirgoota diimokiraasii kana dhabeef kolleejichi mootummaa Federaalaa jala jiraachuu isaan kan wal qabatedha jedhu barsiisonni BBC'n dubbise.
Godina Baalee irraa jijjiirraan gara kolleejjichaa akka deeman kan dubbatan barsiisaa Margaa Gabramaariyaam, manni barumsaa Afaan Oromoo kolleejjicha keessa waan hin jirreef Afaan Amaaraan ijoollee isaanii barsiisuuf dirqamuu dubbatu.
"Mucaan koo gaafa dhuftu afaan hin beektu turte, ani barsiisaas waan ta'eef gargaaree afaan Amaaraa akka bartu godheen, isaan barachaa kutaa 7 geesseetti" jedhu.
"Tokko ammoo afaan waan hin beekneef, oolmaa daa'immanii galuu osoo qabduu amma afaan bartutti jennee manuma jirti" jedhu.
Afaan dhalootaa ykn afaan haadhaa fi abbaa isaaniitiin barachuuf mirga osoo qabanii afaan hin beekneen barachuuf dirqamani jedhu.
Intala obboleessa isaanii of biratti fudhatanii barsiisaa akka jiran kan himan barsiisaan kolleejichaa biroon Dr. Gaaromsaa Tumsaa, "mucaa kutaa tokko bakka biraatti jalqabdee turte, afaan waan hin beekneef oolmaa daa'immanii galuu qabdi jedhanii duubatti deebisani" jedhu.
Barattoonni hedduun bifa wal fakkaataan duubatti deebi'anii barnoota waan eegalaniifi afaan hin beekneen waan barataniif umurii isaaniis qisaasaa jiru barnootattis qabxii gaarii galmeesisaa hin jirani jedhu.
"Dhiibbaa guddaatu jira, garbummaa jechuun ni danda'ama" jedhu Dr. Gaaromsaan.
"Lafa dhoksaa ykn cita lafaa fakkaata"
Manni barnootaa Afaan Oromoo mooraa kolleejichaan ala jiru kiiloomeetira 15 ol akka fagaatu kan himan barsiisonni kunneen daandiinis geejjibnis rakkisaa waan ta'eef ijoolleen deddeebi'anii barachuuf ni rakkatu jedhu.
Barsiisotaa fi hojjettoota kolleejichaa qofa osoo hin taane, hawaasni mooraa kolleejichaa keessa qubatee jiraatuufi kan aanaalee Oromiyaa akka Arsii Nageellee fi Adaamii Tulluus manuma barumsaa Afaan Amaaraa kanatti ijoollee barsiifataa jira jedhu.
Yeroo gara garaatti manni barnootaa Afaan Oromoo akka nuuf banamu gaafannus deebii hin arganne jechuun himatu.
Gama biraan jiraattonni kuma 12 ta'an kolleejicha keessa jiraatan waggoota 27 darbaniif filannoo biyyaalessaas ta'e kan naannolee irratti hirmaatanii hin beekani.
"Namni as keessa jiraatu galmaa'ees filatees hin beekuu, lammummaan isaas hin beekamu" jedhu barsiisaa Margaan.
"Haalli keessa jirru, akkuma lafa dhoksaa ykn cita lafaa fakkaata" jedhu.
Dabalataan jiraattonni naannoo sanaa afaan waan hin dandeenyeef jecha carraa hojii akka waardiyyaafi qulqulleessummaa akkasumas hojilee humnaa biroollee argachuu akka hin dandeenye dubbatu.
Kunis kolleejichi mootummaa federaalaa jala waan jiruufi Afaan hojii mootummaa federaaalaa Afaan Amaaraa waan ta'eef akka ta'e himu.
'Gaaffiin dhiyaate hin turre'
Bara mootummaa dargii akka lafa ijoollee maatii hin qabne itti guddisan ta'ee kan hundaa'e kolleejiin kun erga mootummaan ADWUI'n durfamu aangootti dhufee, sirna federaalizimii bu'uureesseen booda naannoo kam jalayyuu osoo hin galiin hafeera.
Rakkoon hiree filannoo dhabuu hawaasa mooraa kolleejichaa keessa jiraatuus kallattiin kanaan wal qabata jedhu Diinii itti aanaan kolleejichaa Dr. Caalaa Fayyeeraa.
Barattoonni ramadamanii naannolee adda addaa irraa dhufan haalli mijateefii filataa turan, uummanni garuu nannoo kam jalayyuu waan hin jirreef filatee hin beeku jedhu.
Hawaasa irraas "kanaan dura gaaffiin akkasii dhiyaatee hin turre" kan jedhan Dr. Caalaan, "amma garuu uummatni as keessa jiraatu mirgi filachuu keenyaa nuuf kabajamuu qaba jedhanii iyyataniiru" jedhu.
Naannoo kam jalatti akka filatan murtaa'uu baatullee mirga filachuu argachuu akka qaban murtaa'ee jira jedhu Dr. Caalaan.
Mana barumsaa Afaan Oromoo ilaalchisee gaaffiin bulchiinsaaf dhiyaate hin jiru jedhu.
Manni barumsaa sadarkaa 1ffaa fi sadarkaa 2ffaa mooraa kolleejichaa keessa jiru Biiroo barnootaa magaalaa Finfinne jalatti bulaa jira jedhu Dr. Caalaan.
Gaaffiin bulchiinsa magaalaa Finfinneefi bulchiinsa kolleejichaaf dhiyaatee jennaan fedhi jiru ilaalcha keessa galchuun mana barnootaa banuun rakkisaa hin ta'u jedhu.
BBC Afaan Oromo: Hawwii waggoota 23 booda dhugoome
Sababa afaan hojii Afaan Amaaraa ta'eef jiraattonni aanaalee Oromiyaa ollaa kolleejichaa jiran carraa hojii hin argatan kan jedhu garuu sobadha jedhu Dr. Caalaan.
Carraan hojii beeksisatu afaan Amaaraan baha malee Afaan Amaaraa danda'uun ulaagaa miti jedhu.
Kolleejjii kana olaantummaan kan bulchu Ministeerri Qonnaa rakkoolee filannoon wal qabatanis ta'e rakkoo afaan ofiin ijoollee barsiifachuu dhabuu kana quba hin qabu.
"Rakkoon kun jiraachuu quba hin qabu, komiin nu biratti dhiyaates hin jiru ta'us garuu ni qulqulleeffanna" jedhan Direektarri Qunnamtii Uummataa Ministeera Qonnaa Obbo Alamaayyoo Birhaanuu.
Koolleejichi wayita ammaa sagantaa idileen barattoota 3500, sagantaa halkaniin ammoo barattoota 800 barsiisaa jira.